Ceftazidime Pentahydrate Cas 78439-06-2 Qiimaha, Iibiyaha Bolise
[CAS MAYA. ] 78439-06-2
[Miisaanka Molecular] 636.65
[ Formula Molecular ] C22H22N6O7S2 · 5H2O
[Muuqaalka] budada crystalline cad
Ku saabsan Ceftazidime Pentahydrate
Ceftazidime pentahydrate waa jiilka saddexaad ee cephalosporin antibiyootiga. Waxa loo isticmaalay in lagu barto borotiinada isku xidha penicillin, gaar ahaan PBP3.
Waxa kale oo loo isticmaalay sidii qalab doorasho oo loogu talagalay gumeysiga mutant. Ceftazidime waxay beegsataa bakteeriyada garaam-negative, oo ay ku jiraan Pseudomonas aeruginosa oo ay aad uga yar tahay ka hortagga cocci garaam-positive ah. Waxay ku milmi kartaa dareeraha acidic iyo alkali.